Izilwane ezinwabuzelayo ezishisayo: ukuthakazeliswa nezinyoka njengezilwane ezifuywayo ezindaweni zasendle
Izinyoka njengezilwane ezifuywayo
Ukulima inyoka kusho ukuthwala umthwalo okhethekile
Izinyoka ngokuvamile zenza ukusabela okuhlukile kubantu: ukuzonda noma ukuthakazelisa. Labo bantu abathandekayo ngomusa wenyoka abanakuneliseka uma izilwane ezingenalutho zikwazi ukuhamba, kuphela ngokuhambisa izikali zabo zesisu.
Izilwane ezimbi ezithandwayo: ukuthakazeliswa nezinyoka ezindaweni ezisemakhaya
Bese bahlambalaza ngokuvela kwangempela kwezilwane.
Izinyoka endaweni ye-terrarium
Izinyoka, zicacile kuwo wonke umuntu, hhayi ezifuywayo ezivamile. Kakade ukudla okunomsoco kubonisa ukuthi izinyoka kufanele zigcinwe ngokuphelele kunokwesibonelo, i-hamsters, izingulube zezinyane kanye namanogwaja abomvu.
Izigameko ngokuvamile zidla kuphela izilwane eziphilayo. Ngisho noma ukudla akusekho, isibonelo, ukuphathwa kwezinkukhu zansuku zonke noma izintwana ezincane ezinamantombazane ezinsuku eziningana kuyisimiso sezinja ezithile ze-constrictor. Ihluke kakhulu kunalokho okuvamile ngemikhaya ejwayelekile yasekhaya, engadliwa ngendlela yama-pellets noma izitsha zeplastiki.
Ukugcinwa kwezinyoka ngokuvamile kuyinkimbinkimbi kakhudlwana futhi kunezindleko ezingaphezu kwesimo sengqondo yengulube. Kukhona nezindleko eziphakeme kakhulu, z. B. kusukela ezindlini zikagesi zesibani sokushisa (mhlawumbe nokushisa) nokudla okubizayo ndawonye.
Inyoka eluhlaza e-terrarium
Umgcini wezinyoka ophetheyo unikeza izilwane zakhe izimo zokuphila ezingcono kakhulu esiteshini sakhe.
Kubalulekile ukuthi i-terrarium yenyoka yenyoka ishintshwe, ngoba akuzona zonke izinyoka ezizwa zikhululekile endaweni efanayo. Izinyoka ezihlala emhlabathini kumele zibe nezindawo ezinkulu, kuyilapho izinyoka zizwa zikhululekile ezindaweni zokuhlala ezivame ukuphakama kunokuphakama.
Ukuze ubonwe ngobusuku ngobusuku, kunengqondo ukuthi ube nesibani esinokukhanya okubomvu noma ku-terrarium, ngoba izinyoka azikwazi ukubona ukukhanya kulo mbala wombala bese ungazizwa ziphazamiseka abantu.
Njengomgcini wezinyoka wesikhathi esizayo kumele futhi aqinisekise ukuthi i-terrarium ihamba kahle emoyeni. I-ventilation ewanele ingatholakala ngokusebenzisa ishidi le-perforated sheet noma i-plastic gauze, okutholakala nemigodi yokuphuza umoya. Isimo esihle se-ventilation sihlose ukufakwa kwezivalo ezimbili zokuvuthisa umoya. Ngakolunye uhlangothi endaweni ephansi, ngakolunye uhlangothi endaweni engenhla.
Izinhlobo eziningi zezinyoka zidinga indawo yokucasha ukuze zithathe umhlalaphansi isikhathi sokuphumula. Ngokuya ngohlobo lwenyoka, izindawo ezifanelekayo zokukhuphuka, izindawo ezishisayo zokushisa i-sunbathing kanye nomgodi wokunisela, ongase usetshenziswe yinyoka njengezindawo zokugeza, nazo zisezindaweni ezifanelekile.
Noma ubani ofisa ukugcina imigqa ewela ezigabeni "ezinobuthi" kanye / noma "ngaphezu kwamamitha angu-3 ngosayizi" kufanele avunywe yihhovisi elibhekele umphakathi. Lapho usebenzisana nezinyoka ezinobuthi, kunconywa ukuthi kube ne-counter compact serum endlini ukuze ukwazi ukuthatha izinyathelo ngesikhathi sokuluma.
Ama-parrots njengezilwane ezifuywayo
Izibhamu njengezilwane ezifuywayo
Amagundane njengezilwane ezifuywayo
Amakati njengezilwane ezifuywayo
Izilovuzane njengezilwane ezifuywayo
I-Pony njengesilwane | Izilwane ezifuywayo